Iimpendulo ezikhawulezileyo kwiimbuzo ze-SEO ezicelwa rhoqo
Ukwenza ukuba indawo yakho ibonakale kwi-SERP, kufuneka ufunde okungaphantsi kweyona ncazelo yenkcazelo yenkcazelo yenkcazelo yenkcazelo yeyona injini kunye nendlela ekuchaphazela ngayo iindawo zakho zokubala. Ukwakha umkhankaso wokwenza uphando okanye ukujonga umsebenzi weengcali zakho ze-SEO, kufuneka ufumane ulwazi olunzulu malunga nemigqaliselo yokusetyenziswa kweewebhu kunye nobuchule. Ngoko ke makhe sithethe nge-SEO ebalulekileyo izinto ezininzi abaqalayo abanemibuzo malunga nendlela yokuphuhlisa i-website kodwa abaqinisekanga ukuba ngubani ofuna ukucacisa.
IMIBUZO ephakamileyo ebuzwa rhoqo malunga ne-SEO
Yintoni na umahluko phakathi kocando olusesikweni kunye nokuhlawulelwa?
I-Pais okanye iziphumo zophando ezingekho phantsi kwezona zinto zivela kwi-TOP ye-SERP iphepha kwaye unomqondiso "Izikhangiso. "Kwezinye iimeko, ezi ziphumo zi no kuvela kwicala lephepha le-SERP. Le yimihlaba eyenziwa ngabathengisi ukuba bavele kwi-TOP yeenjini ezahlukeneyo zokufuna iimbuzo zomsebenzisi ezifanelekileyo - make own logo design free online. Ukufikelela kuphando oluhlawulelwayo, akudingeki ukuba wenze umkhankaso wokwenza umsebenzi. Yonke into oyifunayo kukuhlawula umsebenzisi ngamnye ngokuchofoza kwisibhengezo sakho. Olu hlobo lwesibhengezo esikhokhelwayo lubizwa ngokuba yi-pay-nganye-klikha yokukhangisa kwaye isetyenziswe ukutsala iindwendwe ezintsha ukusuka kuphando kwaye uphakamise umlinganiselo wokuqhosha.
Uphando olusisigxina okanye olungakhokhelwa lubhekiselele kwiziphumo ze-organic ezivela kwiinjini zokukhangela ngokusebenzisa ukulungiswa kwewebhusayithi esemgangathweni. Umthombo wewebhu obeka kwi-TOP yosesho lwezinto eziphilayo ungabonakala ngokubaluleka kwawo, umgangatho, kunye no-SEO-ubungane. I-website esemgangathweni ye-TOP kufuneka iphuhliswe ngokwemiqathango yemigangatho yokukhangela. Ngokukhokelela ekutshweni kwendalo, uphakamisa amathuba akho ekuphuculeni ukukwazisa nge-brand kunye nokutsala umgangatho wendlela eya kuguqula ukuthengisa.
Ndingakanani na ukuhlawula iiNkonzo ze-SEO?
Ixabiso leenkonzo zengxube ye-injini iyahluka ngokuxhomekeke kwimihlobo yebhizinisi lakho, i-niche yakho yemakethe kunye nobukhulu bokusebenza (indawo, ilizwe, jikelele). Ukongezelela, ixabiso lixhomekeke kwi-optimistic service provider igunya kunye nedumela. Ukuba lihlala likwazi ukuhlala ixesha elide kwi-arhente yehlabathi yokuthengisa ye-digital, ngoko mhlawumbi indleko zeenkonzo zazo ziya kuba ngaphezu kwexabiso lemarike. Nangona kunjalo, lonke utyalo-mali lwakho luya kuhlawulwa kwii-spades. Kungenxa yoko akufanele ube nokungathembeki malunga nexabiso lophuhliso lomgangatho.
Musa ukuwa kwiinkampani ezinikezela nge-SEO kumaxabiso athile kakhulu. Kwiimeko ezininzi, kukho indlela engenzi nzuzo kunye nobuqhetseba emva kwayo. Ngokuqhelekileyo, ezi nkampani zisebenzisa iindlela ze-SEO ezimnyama zokuphumeza umphumo osheshayo. Nangona kunjalo, kunokukhokelela kwizigwebo zeGoogle kunye nokuhla kwezinga.
Emva kokuba ndiqalise i-SEO, kufuneka ndilindele kangakanani ukujonga iimphumo zokuqala ezilungileyo?
I-SEO yinkqubo echitha ixesha efuna ixesha kunye nemizamo. Ayikwazi ukuphunyezwa ngobusuku. Kuthatha kwiiveki ezi-6 ukuya kwe-9 ukuphumeza zonke izicwangciso ze-SEO eziyimfuneko kunye neenyanga eziliqela emva kokuba zonke izilungiso zinikezelwe ukuhlaziywa kwee-intengiso. Abaqhubi be-injini yokukhangela badinga ixesha lokuba badibanise kwaye batyekise utshintsho lwewebhusayithi yakho ukuze kufumane indawo yakho kwindawo ephezulu kwi-SERP. Ngokuxhomekeka kwi-niche yakho yemarike, ubungakanani besayithi kunye nomgangatho wokuphucula, kuthatha inyanga 6 kuya kwe-9 ukuqala ukujonga i-SEO yokuqala.